१२ वर्ष अगाडी भाडाको एउटा कोठामा बस्ने नेहाको अहिले छ बंगला, भा,वु,क हुदै लेखिन यस्तो पोस्ट ! – " सुलभ खबर "
१२ वर्ष अगाडी भाडाको एउटा कोठामा बस्ने नेहाको अहिले छ बंगला, भा,वु,क हुदै लेखिन यस्तो पोस्ट !
नेहाको यस पोस्टमा थुप्रै स्टारले प्रतिक्रिया दिएका छन्। कमै मान्छेलाई यो थाहा छ कि सिनेमा जगतमा आउनुभन्दा पहिला नेहा र उनको दिदि र दाई भजन गाउथे ।‘इन्डियन आइडल’ मा प्रतिस्पर्धीको रुपमा आएपछि नेहालाई सफलता मिल्यो र त्यसपछि उनले सफलताको सिडी चढिन् नेहाले ‘इंडियन आइडल’ मा प्रतिस्पर्धीको रुपमा भाग लिएपछि म्यूजिक एल्बम निकालिन जसको नाम ‘नेहा द रक स्टार’ थियो । जुन २००८ सालमा आएको थियो । त्यसपछि उनलाई सिनेमा जगतमा काम मिल्न थाल्यो ।